February 2017 - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa ku dhawaaqay in abaaraha ka jira dalka ay yihiin musiibo qaran oo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir caalami ah oo Beesha Caalamka ay ka qeyb-gashay, kaasi oo looga hadlayey sidii looga jawaabi lahaa abaaraha ka jira…
iftineducation.com – Maxkamad ayaa lagu wadaa in maalinta berito lasoo taago labo haween ah oo loo heesto in ay ka dambeeyeen dilkii garoonka Diyaaradaha Kuala Lampur loogu geestay nin la dhashay Madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Malaysia Janaraal Maxamed Apandi Cal ayaa sheegay in labadan Haween oo kasoo kala jeeda dalalka Indonesia iyo Vietnam lagu soo oogi doono…
iftineducation.com – Gurmadkaan biyo dhaamintaa oo socon doona muddo bil ah isla markaana ay maal galineyso Hay’adda Socdaalka Aduunka ee IOM ayaa maamulka gobalka Mudug ee Galmudug waxa uu ka bilaabay qaar ka mid ah deegaanada gobalka. kuwaasi oo ay ka jiraan biyo la’aan heysata dadka iyo duunyada goobahaasi ku nool. Cawil Nuur Gufaaco oo ku hadlayay magaca Hay’adda barnaamijkan maal…
iftineducation.com – Ciidamada Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay nin dhalinyaro ah oo la sheegay in uu kamid ahaa dabley shalay weerar hubeesan ka geesatay Degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Sargaal katirsan Nabad Sugida ayaa laga soo xigtay in ninka la qabtay uu ahaa ninkii waday gaari shalay ku qarxay agagaarka Ex-Control Afgooye ee magaalada Muqdisho, ninkan…
iftineducation.com – Sidaan la socono Qur’aanka Kariimka ah waxaa ku xusan ama lagu sheegay xayawaanaat baddan, kuwaasi oo Alle Weyne micno gaar ah ku tilmaamay, wax qabadkiisa iyo manaafacaadkiisaba. xayawaanaatka lagu xusay Qur’aanka waxaa kamid ah, Geella,Lo’da, Ariga, Dameerka, Eeyga, Maska iyo kuwa baddan. Hadaba mucjisooyinka Qur’aanka kariimka ah lagu xusay waxaa kamid ah xayawaanka Caaradda ama caar-caaradda, wuxuu Alle Weyne,…
Daawo Sawirada: Askarigii sababta u ahaa in la qabto gaarigii maanta ku qarxay Muqdisho oo ….
iftineducation.com – Waxaa maanta agagaarka Ex-Contarool Afgooye ee Degmada Dayniile ka dhacay qarax laga soo buuxiyay gaari nuuciisu ahaa Surf, waxaana qaraxan ka dhashay qasaaro dhaawacyo ah oo soo gaaray ciidamo katirsan dowlada Soomaaliya. Gaariga ku qarxay Degmada Dayniile ayaa la sheegay in uu ahaa gaari saakay weerar ka geestay Degmada Boondhoore ee gobolka Banaadir, waxaana gaariga ay saarnaaa dabley hubeesan…
Telefoon caan ka ahaa dunida labaatan sano ka hor oo dib loo soo saaray, isagoo casri ah (Daawo Sawirro)
iftineducation.com – Shirkada Nokia ayaa maanta bilowday iney dib u soo saarto Telefoonka 3310 oo 17 sano ka maqnaa suuqa ka dib markii la soo saaray noocyo kale oo casri ah. Dad badan waxay u arkaan inuu ahaa telefoon aad u wanaagsan oo adkeysi leh, in ka badan 126 milyan oo xabo ayaa la iibiyay ka hor sanadkii 2005-tii. Telefoonka Nokia…
Shirkad ajnabi ah oo boqolaal xoogsato ka ceyrisay dekeda magaalada Berbera
iftineducation.com – Shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa shaqada ka cayriyey 250 ka mid ah shaqaale degaanka ee ka xoogsan jiray dekeda magaalada Berbera DP World ayaa dhowaan waxaa maamulka Somaliland uu u saxiixay in muddo 30 sano ah ay gacanta ku heyso maamulka dekeda Berbera ayaa la sheegay inay doonayso inay isbedel ku samayso Shaqaalaha dekedan. Maamulka Shirkadda…
Madaxweynaha da’da ah ee Zimbaabwe oo GABAR DHEYLAHA AROOSAY DHALASHADIISA
iftineducation.com – Hogaamiyaha dunida ugu da’da weyn, Robert Mugabe oo madaxweynaha ka ah dalka Zimbabwe, ayaa u dabbaal degay sannadguuradiisii 93aad. Xafladda dhalashadiisa waxaa ka qayb galay kumanaan taageerayaal ah, taasoo ka dhacday meel dibadda ka ah magaalada Bulawayo. Wuxuu ku labbisnaa koofi iyo shaar ay xaaskiisa naqshadaysay, wuxuuna sheegay inuusan carrabka ku dhufan doonin cidda beddelaysa. Xisbul-xaakimka ZANU-PF ayaa la…
XOG: Maxay tahay sababta uu qaali u yahay Passport Soomaaliya?
iftineducation.com – Waxaa jirta kororka cabashada inta badan laga muujiyo sameysashada baasaboorka Soomaaliya. Waxaa markii ugu horeysay arintaasi ka hadlay agaasimaha hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo sharaxaad ka bixiyay sababta qaali ka dhibtay baasaboorka Soomaaliya. Maxamed Aadan Jimcaale “ Koofi” agaasimaha hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa sheegay in qalabka lagu sameeyo baasaboorka Soomaaliya uu yahay mid Qaali ah. Qalabka…